Incwadana ye-EcubWare 4.2.1 -IJinhua Ecubmaker Technology Co, Ltd.
Isikhokelo sokuSebenza kweSoftware
Ukufakwa kweNdawo yokuSingqongileyo kunye nokuQala
1.1 Indawo ebalekayo
1.3 Faka isakhelo se-NET 3.5
Umsebenzi we-2.FDM 3D wokuprinta
2.1 Ukwaziswa koJongano
2.2 Imenyu yebar
2.3 Ulawulo lwePrinta
2.3.2 Khetha iPrinta kwiMenyu
2.4 Imodeli yokungenisa
2.4.1 Imodeli yokungenisa iMenyu ephambili
2.4.2 Ngenisa iModeli ngesixhobo seMenyu
2.4.3 Imodeli yokungenisa ngaphakathi ngeMpuku Tsala
2.5 Useto lweParameter yomzekelo
Ukuseta iParameter yokuPrinta
2.6.1 Izicwangciso ezicetyiswayo
2.7 Ukucoca kunye nokuGcina
2.8 Umsebenzi weqhosha lasekunene
2.9 FDM Umbala omnye we-3D Printing
Ukushicilelwa kwe-3D kwe-2.10 ye-FDM
3.Laser mfanekiso Umsebenzi
3.1 Vula umsebenzi weLaser kwiMenyu
3.2 Ifomathi yemifanekiso exhaswayo
3.3 Ukwaziswa koJongano
3.4 Ifomathi yemifanekiso exhaswayo
3.5 Inyathelo ngenyathelo Inkqubo yokuThumela kwelinye ilizwe
3.6 Uluhlu lweXabiso oluPhakanyisiweyo oluCetyiswayo
4. Umsebenzi we-CNC wokuKrola
4.1 Umsebenzi we-CNC ovulekileyo kwiMenyu
4.2 Ujongano loMsebenzi
4.3 Ukungenisa iVector
4.5 Ukungenisa iGcode
4.6 Yenza isicatshulwa esiyiSiko
4.7 Yenza iMilo
4.8 Yenza i-Embossed
4.9 Iingxaki Nezisombululo
4.9.1 Ifayile yeVector ayinakuvulwa
4.9.2 I-Gcode eveliswe yiFayile yeBitmap ineBorder
5.1 Chinse ukuya kwisiNgesi
5.2 IsiNgesi ukuya kuChinse
"I-Ecubware" sisoftware esebenza ngeendlela ezininzi ebandakanya umsebenzi we-FDM 3D Printing, Umsebenzi weLaser Engraving kunye nomsebenzi we-CNC wokukrola. Zonke iifayile ezivelisiweyo zesoftware (*. Gcode) ziyafumaneka kwiimodeli ze-TOYDIY ezenziwe yi-EcubMaker, imodeli yokusebenziseka inezibonelelo zokutshintsha ngokulula kweemodyuli ezisebenzayo, isantya sokukhawulezisa ukukhawulezisa kunye nokuveliswa kwendlela efanelekileyo, kunye nomsebenzi onamandla wokubona okupheleleyo kwemodeli ye-3d kunye nendlela yesixhobo.
Indawo yokubaleka yeWindows: Windows 7 okanye ngaphezulu.
Unxibelelwano lwenethiwekhi: Unxibelelwano luyacetyiswa
Ikhadi lemifanekiso: Inkxaso ye-OpenGL
I-OpenGL lulwimi olunqamlezayo, isinxibelelanisi senkqubo yokujongana nokunikezelwa kwe-2D kunye ne-3D vector Graphics. Isetyenziselwe ukuzoba iindawo ezintsonkothileyo ezinamacala amathathu kwizinto zokuqala ezilula. Ukuba akukho"Opengl 2.0" okanye ngaphezulu kwedrayivu yekhadi lemizobo kwikhompyuter yomsebenzisi, iya kuchaphazela ukuvulwa kunye nokusetyenziswa kwesoftware ye-EcubWare. Ngokubanzi, uguqulo olungagqibekanga lokubonisa iadaptha lisezantsi emva kokuba inkqubo ifakiwe, njengoko kubonisiwe kumfanekiso olandelayo.
Khetha iadaptha yokubonisa (ukubonisa okungagqibekanga emva kofakelo lwenkqubo: iMicrosoft isibonisi esisiseko)
Ngaphandle komqhubi we-OpenGL, le mpazamo ilandelayo yenzeka xa usebenzisa isoftware ye-EcubWare.
Hlaziya umqhubi wemizobo. Okulandelayo yindlela yokusombulula ingxaki.
Hambisa imouse ku "Khangela iwebhu kunye neWindows"
Igalelo "Umphathi weSixhobo"
Vela "Umphathi wesixhobo"
Khetha "Bonisa iadaptha" kunye "neMicrosoft Basic Display Adapter"
（Ukubonisa okungagqibekanga emva kofakelo lwenkqubo："IMicrosoft Basic Display Adapter"）
Cofa ekunene ukuhlaziya umqhubi
(Ikhompyuter kufuneka ixhumeke kwi-Intanethi)
cofa "Khangela ngokuzenzekelayo isoftware yomqhubi ehlaziyiweyo"
Ukukhangela kwi-intanethi yesoftware ...
Ukukhuphela isoftware yomqhubi emva kokufunyanwa
Ukufaka isoftware yomqhubi emva kokukhutshelwa
Ufakelo lube yimpumelelo kwaye kwaboniswa igama lekhadi lemizobo elichanekileyo
Emva koko jonga ukuba isoftware ivulekile ngokufanelekileyo
Ukuba uyivule ngokufanelekileyo, ingxaki isonjululwe. Ukuba ayinakuvula, mhlawumbi kungenxa yokuba ikhadi lemizobo alixhasi i-OpenGL okanye enye ingxaki yokuhambelana.
Ukuba i-NET Framework 3.5 okanye ngaphezulu ayifakwanga, ezi zinto zilandelayo ziyavela xa usebenzisa i-Laser Function Software , njengoko kubonisiwe ngezantsi
Faka i-NET Framework 3.5 nangaphezulu ngesisombululo 2: Xa ikhompyuter yakho inxibelelana ne-intanethi, Cofa ku "Khuphela kwaye ufake eli nqaku" njengoko kubonisiwe kumfanekiso ongentla. Emva kokucofa, le meko ilandelayo iya kubonakala kude kube sekupheleni kofakelo.
Inyathelo 1: cofa kabini iphakheji yokufaka， Ifayile iyazikhuphela ……
Iya kujonga izinto ezintathu, ukusilela ngakunye kuya kukhokelela ekusebenzeni ngokungaqhelekanga kwesoftware ye-EcubWare. Ukuba ujonga ok, unokucofa u "Inyathelo elilandelayo", okanye ucofe u "Tsiba ngaphezulu" ukuya kwinqanaba elilandelayo.
Inyathelo 2: Emva kokusetha umendo, cofa ngokulandelayo
Inyathelo 3: Cofa ngokulandelayo
Inyathelo 4: Khetha into ofuna ukuyifaka. Ukuba oku kufakelo lokuqala, khetha zonke iinketho ezifuna ukufakwa. Emva koko Cofa u "Faka"
Isiprinta esiphambili esisetyenzisiweyo kule modyuli kubandakanya TOYDIY 4in1 3D Printer（I-TOYDIY 4in1 ye-FDM Isixhobo esisentloko / I-TOYDIY 4in1 FDM-Isixhobo esiBini） 、I-FANTASY PRO4 kunye ne-TOYDIY 4in1 3D Printer 2.0（I-TOYDIY 4in1 ye-FDM Isixhobo esisentloko / I-TOYDIY 4in1 FDM-Isixhobo esiBini）
Ujongano oluphambili lubandakanya "Imenyu yebar", "Ibar yesicwangciso seParameter", "Jonga iBar" kunye ne "Model Parameter toolbar". Ungalutshintsha ulwazi lomshicileli kwi-bar yemenyu kwaye uvule useto lobuchwephesha. Indawo yokumisela iparameter yindawo ephambili yokusebenza, apho umsebenzisi angena khona kwiiparameter ezahlukeneyo ezifunekayo ukusika kwaye avelise ifayile yeG-Code engcono esekwe kwezi paramitha. Indawo yokujonga isetyenziselwa ukujonga iimodeli, ukubeka iimodeli, iimodeli zolawulo, ukujonga kwangaphambili indlela yesilayidi, ukujonga iziphumo zesilayidi.
Umsebenzi ikakhulu ubandakanya ukuvula kunye nokugcina ifayile yemodeli, ukuseta ipharamitha, ukongeza imodeli, uncedo njalo njalo.
Ngethuba lokuqala i-EcubWare ivula, ibhokisi yencoko "Yongeza iPrinta" iyavela. Njengoko kubonisiwe ngezantsi, khetha igama lomshicileli elihambelana nentloko yezixhobo oyifunayo. Okungagqibekanga ngu "TOYDIY 4in1 FDM ToolHead" (Isihloko seFDM).
Vula ujongano lwesoftware, kwimenyu ephambili, "Yongeza iiPrinta", yongeza iprinta oyifunayo.
Isoftware ineendlela ezahlukeneyo zokungenisa imodeli, abasebenzisi banokukhetha ukungenisa iimodeli ngokokukhetha kwabo.
“Ifayile ”-” Vula (ii) Fayile ”
Fumana ibar yesixhobo kwicala lasekhohlo lesoftware ，phakathi,
Imodeli yokungenisa. Ungalayisha iimodeli ezingama-3d ngeendlela ezahlukeneyo, ezinje nge-stl, obj, Dae, kunye ne-AMF. Okanye ungasebenzisa uLayishe imodeli yeFayile kwimenyu yeFayile, okanye ungasebenzisa CTRL + l. Layisha ifayile yekamela, kwaye isoftware inokwenza utshintsho kwimodeli, njengokuguqulela, ukujikeleza, ukukala, ukwenza isipili.
Tyelela iwebhusayithi esemthethweni. Olunye ulwazi lunokukhutshelwa kwiphepha lasekhaya.
Imodeli yokukhuphela. Kwiphepha, unokuzikhuphelela ezinye *. iifayile zefomathi kwifomathi ye-.STL
Ukungenisa imodeli, cofa kwimodeli egcinwe kwikhompyuter yakho kwaye utsale imodeli kulungelelwaniso oluphambili lwe-EcubWare.
Ukuphucula umphumo wokuprinta ogqibeleleyo, imodeli kufuneka ihlengahlengiswe kwindawo efanelekileyo kunye nobukhulu. Abasebenzisi bangakwenza oku ngokusebenzisa i "Model Parameter toolbar" ..Nantsi indlela esebenza ngayo：
Hambisa: Ibhodi yokukhangela kwindawo yokujonga yindawo yokuprinta. Cinezela kwaye ubambeIqhosha leMouse lasekhohlo Utolo kwaye usiya phezulu ezantsi, Ekhohlo-Ekunene ukuze ubeke imodeli yakho kwiQonga. Sebenzisa Cofa ubambeIqhosha le Mouse lasekunene Ukujikeleza lonke iqonga. Imodeli inokubekwa naphina kwindawo. JikelezisaIsondo leMouse ukusondeza i-Zoom-In, Zoom-Out imodeli ukubona iinkcukacha.
Isikali: Model Scaling Transformation, seta ipesenti efanelekileyo yokulinganisa. Nje ukuba imodeli ikhethwe, cofa indawo yeSikali kwaye uza kubona izikwere ezintathu kumphezulu womzekelo omele i-X, Y, kunye ne-Z axes. Cofa uze utsale ibhokisi ukulinganisa imodeli ngokuphindaphindiweyo. Ungafaka kwakhona i-zoom factor kwi-zoom input box, ibhokisi ekunene "Scale *". Ungangenisa ngqo ixabiso leSayizi kwibhokisi yegalelo yoBungakanani, eyibhokisi ngasekunene "Ubukhulu *", uqiniseke ukuba uyazi ukuba yeyiphi imilinganiselo emele imodeli kwi-axis nganye. Ukongeza, ukukala kwahlulwe kwaba"Ukulinganisa okungafaniyo" kunye "nokulinganisa okungafaniyo" , ukusetyenziswa okungagqibekanga kokulinganisa okungafaniyo, oko kukuthi, imenyu yokulinganisa kwimeko yokutshixa. Ukusebenzisa ukungalingani okungafaniyo, nqakraza kwiqosha. Ukulinganisa okungafaniyo kunokujika ityhubhu ibe yicuboid. Ukuseta kwakhona kuya kubuyisela imodeli kwimo yayo yoqobo, kwaye kuMax kuya kulinganisa imodeli Kukobukhulu obukhulu umshicileli anokuprinta.
Jikelezisa: Cofa ujikeleze, kwaye uza kubona amakhonkco amathathu kumphezulu womzekelo, imibala ibomvu, iluhlaza, naluhlaza okwesibhakabhaka, emele i-X, Y, kunye ne-Z axes. Beka imouse kwimisesane, cofa ekunene cofa kwaye utsale ungenza imodeli ejikeleze ujikelezo lwe-axis ye-engile ethile, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ivumela kuphela abasebenzisi ukuba bajikeleze i-15 engile. Ukuba ufuna ukubuyela kwindawo yoqobo, unokucofa iqhosha lokuseta kwakhona kwi Imenyu ejikelezayo. I Lay iqhosha iqhosha lijikeleza ngokuzenzekelayo imodeli kwindawo ethe tyaba ezantsi, kodwa ayiqinisekisi mpumelelo ngalo lonke ixesha.
Isipili: Cofa kwiintolo ezine okanye ii-icon ezimbini eziluhlaza ukwenza umfanekiso wokuqala. Nje ukuba imodeli ikhethwe, cofa iqhosha le-Mirror ukuya kwi-Mirror imodeli ecaleni kwe-X, Y, okanye iZ axes. Umzekelo, imodeli yasekhohlo inokuboniswa kwimodeli esekunene.
Useto lweparameter yokuprinta yahlulwe "Ngokucetyiswayo" kunye noseto lwe "Siko".
"Kuyacetyiswa" inokuqondwa njengendawo emiselweyo yokuseta ipharamitha. Ngenisa imodeli kwaye wenze useto lweparameter yomzekelo emva koko ucofe u "Slice" ukuthumela i-Gcode ngaphandle. Akukho mfuneko yolunye uhlengahlengiso kuseto lwakho lokuPrinta. Isoftware ikwimeko emiselweyo.
Ukukhetha umshicileli, umshicileli kwimenyu ehlayo kufuneka yongezwe kwimenyu ephambili "Yongeza uMatshini", okanye ayizukuboniswa.
Izinto eziphathekayo. Izinto ezingagqibekanga "PLA-T200". Izinto ezahlukeneyo zineempawu ezahlukeneyo. Ukuba ufuna ukongeza uhlobo lwezinto eziphathekayo, unokucofa, emva koko ucofe u "Imathiriyeli yokuLawula ...", uhlengahlengise izinto ezintsha, uguqule ulwazi lwezinto ezibonakalayo, useto lokuprinta, njl.
：0.1 no-0.2, phrinta ukucwangciswa kwesiphumo, khetha ngokutsala ichaphaza elimnyama ngempuku. Inani limele ukuphakama komaleko ngamnye. Inani elincinci kwinani kukhetho, ukucoceka kokucoca, kunye nexesha elide lokuprinta. Ngokubanzi, i-0.2, okanye i-0.2 mm ukuphakama, sisantya esikhawulezayo sokuprinta.
：Gcwalisa useto. Tsala ichaphaza elimnyama ngemouse ukufezekisa ubungakanani bexabiso. Cwangcisa umyinge wokugcwalisa ngokweemfuno zokwenyani, ukuba akunjalo ukuthwala umthwalo, inqanaba lokugcwalisa elicetyiswayo lama-20%.
Nika amandla iGradient: Ukuba yenziwe, uxinano lokugcwalisa luya kukhula kancinci njengoko ukuphakama kokuprinta kunyuka.
: Ezinye izinto ezingaqhelekanga zifuna ukuxhaswa ukuze kuprintwe okungcono. Ukuba ayisetyenziswanga, ukuqhubela phambili kuya kuwa. Ukuyikhetha kuyakwenza ulwakhiwo lwenkxaso phantsi kwemodeli yokuthintela imodeli ekukhutshweni nasekuprintweni emoyeni.
：Yongeza indawo ethe tyaba ejikeleze okanye engezantsi kwento enokunqunyulwa ngokulula. Xa olu khetho lukhangelwe, umsebenzi weRaft uyasebenza. Ukuba ayihloliwe, akukho substrate. Useto oluthile lweparameter luhleliwe kwicandelo elilandelayo, "Shicilela useto lweparameter."
Uluhlu lweparamitha yesiqhelo, umboniso ongagqibekanga oqhelekileyo osetyenziswa kwiiparameter, kuseto lweparameter, nceda ucofe iiparameter ecaleni kwejelo leqhosha elincinci, njengoko kubonisiwe kumfanekiso olandelayo.
Kukho iqhosha "Slicing" kwikona esezantsi ekunene konxibelelwano oluphambili. Emva kokuba kusetyenziswe iiparameter zesilayidi, umyalezo wenqanaba uza kubonisa "isilayidi", iqhosha lokukhawulezisa. Ithi "slicing ..." iyaqhubeka, kwaye xa yenziwe, ikuxelela ukuba ungazisebenzisa kangakanani izinto eziphathekayo, kwiimitha (m), nakwiigrama (G) zezinto.
Emva kokungenisa imodeli, unokucofa kwimodeli, emva koko ucofe iqhosha lasekunene le-mouse, pop-up ekunene nqakraza umsebenzi, kulula ukwenza imodeli. Imisebenzi imi ngolu hlobo lulandelayo:
Imodeli ekhethiweyo yeZikoEmva kokuba imodeli iguqulwe, yandiswa, yabuyiselwa umva kunye neminye imisebenzi, imodeli ayibalulekanga embindini weqonga, cofa olu khetho ukwenza umboniso weziko ubonise.
Cima iModeli ekhethiweyo: Cima imodeli ekhethwe liqhosha lasekhohlo le mouse.
Phinda ukhethe iModeli: Khuphela imodeli ekhethwe liqhosha lasekhohlo le mouse.
Khetha Zonke iimodeli: Khetha iimodeli ezivela eqongeni. Cacisa iPlate yokwakha: Khuphela zonke iimodeli kwiqonga lokuprinta.
Layisha kwakhona zonke iimodeli: Ukuba ucime ngempazamo imodeli kwiqonga lakho, ungasebenzisa eli nqaku ukubuyisela imodeli esusiweyo kwiqonga lokuprinta kwaye uphinde uyenze kwakhona.
Iimodeli zeqela: khetha iimodeli ezininzi kwiqela lokuhamba ngokulula kunye nokukala kunye.
Hlanganisa iimodeli: Ukudibanisa iimodeli ezimbini ezizodwa ngokukodwa, ikakhulu ukushicilela imibala emibini. INDLELA YOKUHLULELA: SPLIT Imodeli edityanisiweyo.
Kuprinta umbala omnye, lunye kuphela uhlobo lwezixhobo kumshicileli, kwaye inkxaso okanye iqonga liqhotyoshelwe kwinto enye. Amanyathelo okusika into enye zezi zilandelayo:
Inyathelo 1: Khetha umshicileli
Inyathelo 2: Ngenisa imodeli
Inyathelo lesi-3: Cwangcisa iiparameter ukuba akukho mfuno ikhethekileyo, iiparameter zokuprinta ezingagqibekanga zinokuba njalo.
Inyathelo 4: Ukucoca kunye nokuGcina
"Ukusika" kwikona esezantsi ekunene kwesoftware, sika imodeli, emva kokuqhubekeka, cofa u "Gcina kwifayile", ifayile yeGCODE evelisiweyo iya kugcina kwidiski.
Inyathelo 3: Cwangcisa iiparameter
Khetha enye yeemodeli kwaye ucofe ekunene ku "Extruder 1:"
Khetha enye yeemodeli kwaye ucofe ekunene ku "Extruder 2"
Inyathelo 4: Dibanisa imodeli
Cofa ekunene ukukhetha zonke iimodeli
Cofa ekunene kwaye ukhethe "Hlanganisa iModeli"
Cofa kwimodeli kwaye ucofe ekunene ukukhetha "iZiko elikhethiweyo leModeli"
Inyathelo 5: Ukusika kunye nokuGcina
Kwinyathelo elingaphambili, cofa u "Slicing" kwikona esezantsi ekunene yesoftware, emva koko ucofe u "Gcina kwiFayile" ukugcina indlela yokusika imveliso kwidiski
Khetha "Isixhobo seLaserHead"
Khetha ”Ewe” ukuvula i-EcubMakerLaser
Umfanekiso oxhaswayo wale Software ngu: *. I-BMP, *. IJPG, *. Png.
①：Eyona menyu. "Ifayile" Imenyu ibandakanya ukungenisa iifayile zomfanekiso, ukuvula iifayile ezivulekileyo kunye nokugcina 'iGcode'; "Ulwimi" unokutshintsha phakathi kwesiTshayina nesiNgesi, kwaye uqalise kwakhona emva kokutshintsha; "Eyongezelelweyo" imenyu eyahlulwe "ngoncedo olukwi-intanethi," kwiwebhusayithi esemthethweni "nakwi" imenyu engaphantsi ".
Ubunjani obuphezulu beBicubic: Zilungele zombini ukwanda kunye nokunciphisa, ukuvelisa imifanekiso egudileyo yokudibanisa iipikseli.
Ummelwane osondeleyo: Gcina imiphetho enzima ukukala umfanekiso ngaphandle kokugungxula nayiphi na ipikseli.
I-Grayscale kunye ne-RGB slider. Ukuba uvula umfanekiso onemibala, ukuguquka ukusuka kumbala ukuya kumbala ongwevu kuyafuneka. Unokukhetha phakathi kombala ochazwe kwangaphambili kwifomula yama-grayscale (Umndilili oLula, Umndilili woBunzima okanye u-Optical ochanekileyo) okanye ukhethe ukhetho "lweSiko" kwaye uchaze ngesandla ukubusa kwento nganye ye-RGB.
Yoqobo I-HQ Bicubic Ummelwane osondeleyo
“Isiko”Iluncedo xa ungenisa imifanekiso eqingqiweyo enjenge clipart, kwaye sifuna ukulawula ubumnyama / ukukhanya kombala ngamnye.
Ukuqaqamba, umahluko kunye nomda we-BW. Ngokuqaqamba nokungafaniyo ungawenza mnyama okanye ukhanyise umfanekiso, kunye nokwandisa umahluko.
Ngokukhetha i-BW ungavula umqobo kumfanekiso: iipikseli eziqaqambe kakhulu kumyinge ziya kuqwalaselwa ukuba zimhlophe, mnyama kuya kuba mnyama.
Zonke ezi zikhetho zichaphazela indlela izixhobo ezahlukeneyo ezisebenza ngayo umfanekiso kunye nokuvelisa iziphumo zokugqibela. Kuba izinto ezahlukeneyo ziziphatha ngendlela eyahlukileyo xa zibhalwe laser, kubalulekile ukudlala ngezi ndlela ukufumana eyona indibaniselwano yesiphumo esifunekayo.
③：Ngomgca ukuya kumgca Isixhobo onokukrola imifanekiso ekumgangatho ophezulu kunye nee-shades ezizizo ezingwevu. Qaphela ukuba ayizizo zonke izinto zokukrola ezilungele le nkqubo: ezinye izinto aziphenduli ngokulandelelana ngokuphela kwamandla e-laser zibakhona kuphela njengokutshiswa okanye ukungatshiswa kombuso okwenza kube nzima ukuvelisa umbala omnyama. Kwezi meko sicebisa ukusebenzisa Isixhobo "sedessing".
④：Ulwalathiso lokukrola i-Laser lunokukhethwa ngokuthe tye, ngokude nangobude. Ngokuba likhulu ixabiso lomgangatho, kokukhona amanqaku evelayo kwaye kulula ngakumbi ukwenza icarbonize. Ke ngoko, amaxabiso ahlukeneyo anokumiselwa ngokweemathiriyeli ezahlukeneyo. Ngokubanzi, amaxabiso acetyiswayo yimigca eli-10 / mm kunye nemiqolo emi-5 / mm yezinto ezenziwe ngomthi.
⑤：Cwangcisa isantya sokukrola kunye nobukhulu bomfanekiso. Isantya sokukrola simalunga ne-300, nayo enokuthi ihlengahlengiswe ngokwento elinganisiweyo. Ububanzi nokuphakama kubonisa ubungakanani boqobo lokukrola.
：Ukulinganisa i-90 ° ngokwexesha ：Umlinganiso we-90 ° Ngokuphikisana newashi
：Flip umfanekiso othe tye ：Flip umfanekiso nkqo
：Umfanekiso wesityalo ：Umbala we-Inver
：Buyisela lonke utshintsho
⑦Laser mfanekiso Imboniso: Iziphumo ezifanelekileyo zahluke kancinci kwinyani. Imifanekiso yoqobo: umfanekiso wokuqala ovela ngaphandle
⑧：Indawo yokubonisa imizobo
⑨Rhweba ngaphakathi: Ngenisa iifayile zomfanekiso; Isilayidi: Guqula imifanekiso ibe ziifayile ze-gcode ezaziwa ngomatshini; Gcina: Gcina njengeefayile ze-gcode.
I-Bitmaps: * .bmp, *. Png, * gif kunye * .jpg
Igrafu yeVector (yokuSebenzisa): *. Svg
Ukubeka iiparameter zokuCoca：
Phakathi kwabo: "Umgangatho" Ingxinano inqaku lelo, elona xabiso likhulu, ukujiya kwesibonisi, kunye nexabiso lesalathiso se-10.
Isantya somoya. Imele isantya sokuhamba kwentloko ye-laser kwindawo engeyiyo yomfanekiso.
Isantya sokukrola: Imela isantya sokuhamba kwentloko ye-laser kwindawo eqingqiweyo. Ixabiso elinconywayo lezinto ezinokubanjiswa akufuneki libe phezulu kakhulu.
Ukwenza iifayile zokukrola：
Isantya sokukrola (mm / min)
Umgangatho (umgca / m)
Le software isetyenziselwa ukukrola isoftware yemodeli ye TOYDIY eveliswe yi-Ecubmaker. Inkxaso yokungenisa imephu ye vector, i-bitmap, imbonakalo ye-Gcode.
Khetha ”CNC Isixhobo seNtloko ”
Khetha ”Ewe” ukuvula i-EcubMakerCNC
①：Ifayile evulekileyo iqhosha. Igrafu yeVector ixhasa ukuvulwa "*. SVG", "DXF". Iifayile zeBitmap zixhasa "*. JPG", "*. JPEG" *. I - BMP "," *. GIF "," *. PNG ".
②：Yenza umzobo. Unokwenza isicatshulwa kunye neemilo ezilula.
③：Sondeza umzobo Ukuba u-x no-y bakhulu kuno-180mm nangaphandle kweqonga, ubungakanani begraphic bubonisa isilumkiso esibomvu.
④：Jikelezisa imilo. Ixhasa i-90 ° ngokwewotshi, i-90 ° ngokuchasene newotshi, iflip, isibuko esithe tyaba kunye nesipili esime nkqo.
⑤：Useto lweparameter. Cwangcisa isantya, nokukrola ubunzulu kunye nokuphakamisa u-Z emva kokukrola kwenziwe. Emva kokusetha, qala kwakhona isoftware ukuze iqale ukusebenza. Isantya sokukrola sichaphazela umphumo wokukrola. Isantya nangokukrola izinto ezahlukeneyo nangokukrola zingasetwa ngokwahlukileyo. Ngokubanzi, kuncinci, kubangcono, kodwa ixesha elide lokukrola.
⑥：Ukuboniswa kwendlela engenanto, olu khetho kufuneka lutshekishwe xa ungenisa kwaye ugcina umzobo, kungenjalo umbhalo uya kungachani.
⑦：Indawo yokubonisa imizobo. Indawo yokujonga kuqala.
Iifomathi zegrafu ezixhaswayo zi *. SVG kunye *. I-DXF, kodwa ayizukuvulwa zonke iigrafu zevektha ezixhaswayo. Kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe *. Iifayile zeDXF.
Qaphela: Ngokubanzi, zonke iifomathi ze-bitmap ezixhaswayo zinokuvulwa, kodwa ezinye i-bitmaps zinomda obajikelezileyo emva kokuba zingeniswe kwisoftware.
Ngenisa isicatshulwa ukuba senziwe le software ayiwuxhasi umsebenzi wokwenza isiqabu, kodwa ibonelela ngesixhobo sokwenza isiqabu, oko kukuthi, i-fusion360 yenkampani ye-Autodesk. Ngeenkcukacha, nceda ujonge ku "fusion360 yenza idilesi yokukhuphela isiqabu" kunye "ne-fusion360 yenza uqeqesho lokunceda".
Iingxaki kwimizobo (umbala wemigca, ibhalwe ngokufihliweyo, njl.njl.)
B. Ingxaki yesixhobo sokuvelisa ifayile ye vector.
Ngokubanzi ngefayile ye-bitmap ngokwayo okanye iingxaki zombala.
A. Jonga ukuba inkqubo yokubonisa ukuhamba ihamba ijongiwe.
B. Vavanya *. Ifayile yefomathi ye-SVG eza nesoftware yokungenisa elizweni. Ukuba ungangenisa umfanekiso owenziwe ngokwezifiso kwakhona.
5. Ukutshintsha ulwimi